चिकित्सा इलेक्ट्रनिक्स नेतृत्व - चीन Fastpcba प्रौद्योगिकी
हामी संसारको 1983 देखि बढ्दै मदत
इमेल समर्थन 0755-26978877
समर्थन कल pcba19@pcb-smt.net
मोटर वाहन इलेक्ट्रनिक्स
सुरक्षा र संरक्षण
सुरक्षा र संरक्षण सफ्ट बोर्ड
चिकित्सा इलेक्ट्रनिक्स नेतृत्व
FASTPCBA प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड चीन, शेन्जेन एक पेशेवर पीसीबी निर्माता छ। विकास को 14 वर्ष संग, FASPCBA उत्पादन क्षमता 35,000 वर्ग मीटर संग, HDI छ पीसीबी को पहिलो वर्ग निर्माता मा उत्तेजित गर्दछ। FASTPCBA ग्राहकहरु लागि घटक सोर्सिंग, समारोह परीक्षण, conformal कोटिंग र पूर्ण विधानसभा सहित सबै दुनिया भर, उच्च गुणवत्ता खुला पीसीबी र पीसीबी विधानसभा सेवा प्रदान गरिएको छ। हाम्रो आक्रामक व्यापार रणनीति हाम्रो लागि उच्च प्रतिस्पर्धी सेवाहरू प्रदान गर्न सक्षम ...
FASTPCBA प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड चीन, शेन्जेन एक पेशेवर पीसीबी निर्माता छ। विकास को 14 वर्ष संग, FASPCBA उत्पादन क्षमता 35,000 वर्ग मीटर संग, HDI छ पीसीबी को पहिलो वर्ग निर्माता मा उत्तेजित गर्दछ। FASTPCBA ग्राहकहरु लागि घटक सोर्सिंग, समारोह परीक्षण, conformal कोटिंग र पूर्ण विधानसभा सहित सबै दुनिया भर, उच्च गुणवत्ता खुला पीसीबी र पीसीबी विधानसभा सेवा प्रदान गरिएको छ।
हाम्रो आक्रामक व्यापार रणनीति हाम्रो विविध, प्रतिस्पर्धी ग्राहक आधार लागि उच्च प्रतिस्पर्धी सेवाहरू प्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ। यो रणनीति मार्फत हामी परिवर्तन बजार अवस्था प्रतिक्रिया छिटो, लचिलो निर्णय र सबै भन्दा मूल्य र ग्राहकहरु को लागि लाभ सिर्जना गर्न सक्षम छन्।
सेवा को लागि, हामीले मा-लाइन व्यावसायिक पूर्व-बिक्री, आदेश बारेमा कुनै पनि प्रश्न समाधान गर्न बिक्री र पछि बिक्री सेवा 7Days 24hours प्रदान गर्नुहोस्। कुनै पनि समय, कुनै पनि आवश्यकता हाम्रो राम्रो प्रशिक्षण र अनुकूल समर्थन कर्मचारी देखि शीघ्र जवाब प्राप्त हुनेछ।
हाम्रो मुख्य बजार युरोप, उत्तर अमेरिका, अष्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका र एशिया छ। हामी थप क्षेत्रमा अधिक ग्राहकहरु संग जडान निर्माण गर्न धेरै प्रयास गर्नेछन्। हामी के गर्न चाहनुहुन्छ सबै, मान, Happyness र अधिक ग्राहकहरु संग उपलब्धि साझेदारी गर्न, हाम्रो उत्पादन द्वारा दुनिया जडान छ।
एक-स्टप सेवा संग पीसीबी र श्रीमती विधानसभा
FR4, उच्च टीजी FR4, उच्च आवृत्ति, फिटकिरी, FPC
भित्री तहहरूको लागि Min.thickness
(घन मोटाइ बहिष्कृत छन्)
एकल / डबल: 0,008 ± 0,004 "
धनु र मोड
बाहिरी घन वजन
भित्री घन वजन
PTH प्वाल सहिष्णुता
NPTH प्वाल सहिष्णुता
हरियो, सेतो, कालो, रातो, नीलो ...
न्यूनतम मिलाप मास्क clearanace
सेतो, कालो, पहेंलो, नीलो ...
एक्स-रे, AOI परीक्षण, कार्यात्मक परीक्षण
पीसीबी को सहिष्णुता
समाप्त बोर्ड को अधिकतम आकार
सं MOQ (1pcs)
HASL, ENIG, विसर्जन चाँदी, विसर्जन टिन, OSP ...
वर्ग, सर्कल, अनियमित (jigs संग)
Q1: तपाईं के सेवा छ?
FASTPCBA: हामी पीसीबी निर्माण, श्रीमती, प्लास्टिक इंजेक्शन र धातु, अन्तिम विधानसभा, परीक्षण र अन्य मूल्य-जोडी सेवा सहित टर्नकी समाधान प्रदान।
FASTPCBA: हाम्रो पीसीबी / PCBA सेवाहरू मुख्य रूप चिकित्सा, मोटर, संचार सहित उद्योग लागि हो।
Q4: हामी उत्पादन समयमा गुणस्तर निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ?
FASTPCBA: हो, हामी लुकाउन केही प्रत्येक प्रक्रिया उत्पादन मा खुला र पारदर्शी छन्। हामी ग्राहक हाम्रो उत्पादन प्रक्रिया निरीक्षण र घरमा जाँच स्वागत गर्दछौं।
FASTPCBA: हामी उच्च गोप्य स्तर मा ग्राहकहरु डाटा राख्न ग्राहक पक्ष स्थानीय कानून द्वारा एनडीए प्रभाव साइन इन गर्न इच्छुक र होनहार छन्।
FASTPCBA: पीसीबी उद्धरण लागि, कृपया Gerber डाटा / फाइल र सम्बन्धित प्राविधिक आवश्यकताहरु को संकेत कुनै पनि विशेष आवश्यकता साथै यदि प्रदान गर्नुहोस्।
PCBA उद्धरण लागि, कृपया Gerber डाटा / फाइल र पनि BOM (सामाग्री को बिल) प्रदान गर्न, र तपाईं समारोह परीक्षण गर्न हामीलाई आवश्यक छ भने, कृपया पनि परीक्षण निर्देशन / प्रक्रिया प्रदान गर्नुहोस्।
FASTPCBA: EXW, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, एफओबी, DDU आदि वितरण सर्तहरू सबै उपलब्ध प्रत्येक उद्धरण आधारित छन्।
FASTPCBA: सामान्यतया 24 बित्तिकै आन्तरिक इन्जिनियर प्राप्त रूपमा 48 घण्टा घण्टा पुष्टि मूल्याङ्कन।
FASTPCBA: होइन, हामी MOQ आवश्यकता छैन, हामीले तपाईंको परियोजनाहरू ठूलो निर्माण गर्न प्रोटोटाइप देखि सुरु समर्थन गर्न सक्दैन।
अघिल्लो: बौद्धिक घर नेतृत्व
अर्को: शक्ति संचार नेतृत्व
94v Led पीसीबी
94v0 एलईडी प्रदर्शन पीसीबी
अल्युमीनियम एलईडी पीसीबी
एल्यूमिनियम पीसीबी Led
एल्यूमिनियम Led लागि पीसीबी
अनुकूलन Led पीसीबी
लचिलो पीसीबी Led लागि
Led पीसीबी सर्किट डिजाइन
पीसीबी Led एल्यूमिनियम
पीसीबी Led Manufacture
गोलो Led पीसीबी
Tubi8 Led टावर चेतावनी हल्का पीसीबी
चिकित्सा इलेक्ट्रनिक्स पीसीबी
चिकित्सा इलेक्ट्रनिक्स सफ्ट बोर्ड
औद्योगिक HTML खाका - यो टेम्पलेट व्यापार विभाग, अर्थात् पेट्रो लागि माइक्रो आला छ। त्यहाँ HTML / सीएसएस प्रयोग यो टेम्पलेट को एक अतिरिक्त थियो।
खराब PCBA सम्बन्धित कारक के हो ...
के टी मा पीसीबी लेआउट को नियम हो ...
कसरी लामो टी लागि श्रीमती उद्धरण चक्र छ ...